Dhaddacha: Obbo Jawaar Mohammad ogeessa fayyaa dhuunfaan yaalii akka argatan ajajame
1 year, 9 months ago 4502 Qoodi
Har'a Hagayya 14/2012 Mana Murtii Sadarkaa Jalqabaa Federaalaa obbo Jawaar Mohammad dabalate shakkamtoota 8 irratti ragaa qorannoo duraa dhagaheera. Ragaa kunneen dhageessifamu eegalusaan dura hojiirra oolmaa ajaja dhaddacha guyyaa 4 dura (Hagayya 10/2012) darban ilaaleera.
Haaluma kanaan obbo Jawaar Mohammad yeroo ammaa kana daran dhukkubsachu isaani fi nyaatallee garaa keessa turuuf isaan rakkisaa akka jiru ibsuun doktara dhuunfaa isaanin yaalii akka argatan gaafataniiru.
Abbaan Alangaa gama isaatin obbo Jawaar yaalii akka argatan gaafatamanii ogeessa fayyaa dhuunfaa isaanin malee yaalii argachuuf hayyamamoo hin taane jedheera. Kun ammoo heera "namni hundu seera dura walqixa" jedhu faalleessaa jechuun mormeera.
Obbo Jawaar gama isaanin "ogeessa fayyaa ani hin beekneen xuqamu hin barbaadu. Namoota mootummaa keessa jiran waanan hin amanneef ogeessa fayyaa dhuunfaa kootin malee osoo lubbuun koo rakkoo keessa seenteyyuu ogeessa fayyaa mootummaatin yaalamu hin barbaadu", jedhaniiru.
Manni murtichi akkaataa keeyyata 21'n obbo Jawaar Mohammad ogeessa fayyaa dhuunfaan akka yaalaman ajaja dabarseera.
Itti aansuun Manni Murtiichi dhaddacha har'aan jecha ragaa namoota lama kan dhagahe yoo ta'u, iyyannoo shakkamtoota galmee Jawar Mohaammadfaa jalatti argaman fi Abbaa Alangaa dhiyeeffatan qorate ajaja dabarsuuf akkasumas ragaa Abbaa Alangaa hafan dhageessisuuf Wixata Hagayya 18/2012f beellama jijiiramaa kenneera.
Maddi: Ethiopia Insider, Reporter
March 22, 2021, 1:18 p.m.
Dhaddacha: Obbo Jawar Mohaammad faa yakka ittiin himataman waakkatan
Feb. 27, 2021, 5:53 a.m.
Hospitaalli Laandimaark Obbo Baqqalaa Garbaafaa Qaallittiitti dhaqee wal'aanuu hin danda'u jedhe
Obbo Jawaar Mohaammadfaa mana sirreessaa Qaalliittiitti tajaajila yaalaa akka argatan murteeffame